CO2 mishiinka laser xardho goynta - Shiinaha Dongguan Glorystar Laser
Feature Product xardho laser CO2 iyo taxanaha Mashiinka goynta ansixiyeen technology gacanta DSP sare oo caalami ah, oo ay leeyihiin xawaare sare, sax goynta sare iyo xasiloonida sare, tayada iyo ratio qiimaha waa mid aad u sarreeya. nidaamka ugu weyn ee la amray karo by U-disk oo aan xiriir PC. Waxay leedahay hawlaha goynta imitative, midabka goynta kala, non-joojin jarida mar off xoog, iwm Farsamada Design mashiinka taxane waxa uu leeyahay dhismaha farsamo sax ah oo aadamuhu waxa la adag ...
CO2 xardho laser oo taxane Mashiinka goynta ansixiyeen technology gacanta DSP sare oo caalami ah, oo ay leeyihiin xawaare sare, sax goynta sare iyo xasiloonida sare, tayada iyo ratio qiimaha waa mid aad u sarreeya. nidaamka ugu weyn ee la amray karo by U-disk oo aan xiriir PC. Waxay leedahay hawlaha goynta imitative, midabka goynta kala, non-joojin jarida mar off xoog, iwm
Mashiinka taxane waxa uu leeyahay dhismaha farsamo sax ah oo aadamuhu waxa la jir baxay adag oo deggan. Waxa ay ansixiyeen xadiidka xawaaraha sare guide dibadda ah, laga keeno motor lugaha iyo darawalka si loo hagaajiyo saxnaanta faafitaanka farsamo.
Qabatinka siku laga keeno iyo muraayadaha on nidaamka indhaha si loo hubiyo in uu nool dheer tube laser iyo hufnaan goynta sare.
Xardho iyo goynta warqad, dhar, caag ah, non-leh tolmo wanaagsan maro dharka iyo alaabta warshadaha, ayaa sidoo kale loo dhan yahay ee goynta saxda ah si qalabka non-birta ah, sida looxa iyo guddiga MDF in boorsadaada, gacan-gashi, caaryada, xayaysiisyada, decoration, qalabka korontada iyo warshadaha caag ah.
Birta, waraaqaha, maqaar, maro, galaas organic, cusbi, looxa, woolens, caag ah, caag,
dhoobada, crystal, Jade, baasaboorka iyo qalabka kale ee non-birta ah.
xardho Speed 0-64m / m
Speed ​​Jarida 0-36m / m
Sugnaantu celi ± 0.05mm
System guurista nidaamka xakamaynta CNC
Mode qaboojinta Water-qaboojinta iyo nidaamka ilaalinta
Isticmaalka Guud Power ≤1250W
Working danab 220 ± 10% 50Hz (60Hz)
Heerkulka Operating 0 ~ 45ºC
Uumi Operating 5% -95%
Software Xakamaynta Glorystar software laser
Format Graphic taageerayaan Pataaliyomka, AI, JPG, PNG, TIF, PCX, TAG,
Previous: Single Station Laser Alxanka Machine
Next: laser sixitaanka mishiinka Fiber
Laser wax xardha
Birta xardho Machine
Birta Laser xardho Machine
GLC-960 goynta laser mashiinka xardho
Size Large Bed Flat Machine Jarida Laser GLC-1325
Mashiinnada Video Camera Jarida Laser GLS-1080V
Laser xardho Oo Goynta Machine CMA-1290T
Laser xardho Oo Goynta Machine CMA-1080
Dhaqaajin karo iyo isweydaarsiga Table Laser Machine Jarida